Kubuntu ကို Canonical ၏လက်မှဝေးစွာစမ်းသပ်ခြင်း Linux မှ
ဝေး Canonical ၏လက်မှ Kubuntu ကိုစမ်းသပ်
မနေ့ကငါ install လုပ်ခဲ့တယ် Kubuntu ၁၉.၁၀ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်မှာ Netbook အပေါ်, အားလုံး KDE ၄.၉ ငါအခုချိန်ထိစမ်းသပ်နေတုန်းပဲဒါကောင်းကောင်းပြောလို့ရတယ်။ နီးပါးစုံလင်တယ် !! .. ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းတော့အရာရာတိုင်းကမကောင်းဘူး။
ငါဆက်မရေးသားမီတစ်စုံတစ်ခုကိုရှင်းပြပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တွင် Canonical ကိုဆန့်ကျင်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စမရှိပါ။ Mark Shuttleworth၊ အဆုံး၌ကျွန်ုပ်ပင်လေးစားမိသောယောက်ျားနှင့်ဆန့်ကျင်။ မရ။ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာ Canonical တို့ထိသမျှသည်ရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါတို့သည်သက်သေပြရှိသည် Kubuntu y Xubuntuသူတို့အသိုင်းအဝိုင်းလက်သို့ရောက်ကတည်းကမကျော်လွှားနိုင်သော ..
မှားယွင်းမှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲငါပြောနိုင်သည် Kubuntu ၁၉.၁၀ ငါဒီဖြန့်ဖြူး၏ငါကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီအကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းသော, KDE ၄.၉ လိုအပ်သောထိတွေ့မှုပေးသည်၊ BlueSystem ပါ ဒါကြောင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်တွေကိုပေးတော်မူပြီ
ငါမကြိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ် debian y Ubuntu ကိုဖြေ။ ။ meta packages များ။ ကျွန်ုပ်မကြိုးစားရသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်ကိုထည့်သွင်းခြင်းရှိ၊ မရှိကိုကြည့်ရှုရန် Netinstall ထည့်သွင်းမှုကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါသည်။ Kubuntu ကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သွယ်ဝိုက်လာနှင့်အနည်းငယ်နှေးကွေးစေ debian.
ငါမနှစ်သက်သောအခြားအရာတစ်ခုမှာတိုးတက်မှုရှိသောပေါင်းစည်းမှုဖြစ်သည် Nepomuk + Akonadi သူလုံလောက်စွာဘောလုံးထိလျှင်ယခု။ In KDE ၄.၉ ကျွန်တော်ပိတ်ထားသည် နီပေါ ပြnoနာမရှိဘူး၊ Kmailမှားတယ် KDEအရမ်းဆိုး တခါတရံငါခံစားရသည် Kmail အနည်းငယ်နှေးသည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည်အခြားအရာများပိုမိုတိုးတက်သည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စွမ်းဆောင်ရည်အထူးသဖြင့်အတူတိုးတက်လာသည် လပိုင် preview ဖြင့်ဖိုလ်ဒါများကိုဖွင့်သောအခါ၊ အနုပညာလက်ရာများအနည်းငယ်တိုးတက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း Air အရောင်များနှင့်အညီဗန်းအတွက်အိုင်ကွန်ဆောင်ပုဒ်ရှိနေသေးသည်။
menu bar ရဲ့ရွေးစရာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက ၀ င်းဒိုးခေါင်းစဉ်ဘားဒါမှမဟုတ် desktop အထက်ပိုင်းမှာခလုတ်တစ်ခုအနေနဲ့အောက်ဖော်ပြပါပုံမှာတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ AND Firefox ကို perfectlyုံပေါင်းစပ်ပေမယ့်မ Rekonq 😛
ငါသည်လည်းနှင့်အတူပြaနာတစ်ခုတင်ပြနေပါတယ် ဝိုင်ဖိုင်နှင့်အတူတစ်ခုခု debian ကျွန်တော့်မှာဖြစ်ပျက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အသစ်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Wheezy ရဲ့ package တွေကိုကျွန်တော်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး Ubuntu ကို 12.04.
ငါဒီမှာရက်အနည်းငယ်နေဖို့, သူတို့အပါအဝင်အပြီးသတ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်စီစဉ်ထားသည် KDE ၄.၉ en debian သို့မဟုတ်ငါဖြစ်ပျက်လျှင်ကြည့်ရှုပါ PCBSD.
ငါပြောနိုင်သည် Kubuntu အဆိုပါဖြန့်ဝေအကြားဖြစ်ပါတယ် လိုလားသူ KDE အခုငါအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ငါမျှော်လင့်တယ် Canonical မှ ကျိန်းသေသင်၏လက်ကိုဘေးဖယ်ထားရုံ Hosting နှင့်အခြားသူများအနေဖြင့်ထောက်ခံမှုဆက်ပြောသည်ပဲ ... ဒါ့အပြင်ငါဖြစ်လိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုကိုတောင်းနိုင်လျှင်, ထို Kubuntu မှခွဲထုတ်လိမ့်မယ် Ubuntu ကို နှင့်၎င်း၏ repositories က။ ဆိုလိုတာကဘာဖြစ်သွားလဲ Chakra, Manjaro သို့မဟုတ်အလားတူ .. ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးကဒီအသက်တာ၌ရှိခဲ့နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » ဝေး Canonical ၏လက်မှ Kubuntu ကိုစမ်းသပ်
ဗားရှင်း ၁၃.၀၄ ကိုအသိုင်းအဝိုင်းကအပြည့်အ ၀ တီထွင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊
ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့ဝိုင်ဖိုင်ပြKနာဟာ KDE ရဲ့မူကွဲအသစ်မှာထင်တယ်။ အနည်းဆုံးငါပဲအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သော Chakra တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်နှင့်အလုပ်ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်ရန်နာရီပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့သည်။
KDE 4.10 ကို အခြေခံ၍ Kubuntu နှင့်ယခင်ဗားရှင်းများမှ Kubuntu ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ၊ အကြောင်းမှာ KDE တိုးတက်လာသည်မှာထင်ရှားသည်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် kubunstu ဟာ Canolical ကနေဝေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ KDE ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်တခြားအချက်တွေထက်ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။
ငါဆောင်းပါးအတွက် kubuntu အဖွဲ့မှမဟုတ်ဘဲ KDE 10.10 မှတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါအရင် KDE နှင့် Kubuntu မူကွဲများကိုကြိုးစားခဲ့သည်၊ အခြားဖြန့်ဝေမှုများတွင်ပြုလုပ်သည့်တိုင်သူတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခဲ့ကြပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ KDE ၄.၈ / ၄.၁၀ သည်ဤတိုးတက်မှုများကိုများစွာဖြည့်စွက်ပေးသည်၊ သို့သော် Kubuntu သည်ယခင်ကလောက်အာရုံစိုက်မှုမခံခဲ့ရပါ။
BlueSystems မှယောက်ျားများသည် Kubuntu ကို အခြေခံ၍ NetRunner ဟုခေါ်သောစီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် Fedora-RHEL ကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးသည် KDE နှင့်ဖြစ်သည်။ Kubuntu အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်။
PCBSD လို့ခေါ်တယ်၊ ငါကအဲဒါကိုငါတစ်ခါမှမစမ်းဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့မေးခွန်းက linux ကဘာကောင်းသလဲ။
အားလုံးနှင့်တစ်ခုမျှမရှိ - PC-BSD သည် FreeBSD + KDE SC ကိုကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည် - ကျွန်ုပ်သည်ယခုခေတ်တွင်အခြားစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုတပ်ဆင်ခွင့်ပြုမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
FreeBSD သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံနှင့်၎င်း၏ Unix အမွေအနှစ်များကြောင့်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ သို့သော် GNU / Linux နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
အကယ်၍ သင်ကခိုင်မာတောင့်တင်းခိုင်မြဲပြီးတည်ငြိမ်သောစနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်လိုလျှင်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး၏ပေါင်းစည်းမှုကဲ့သို့အရေးမကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင်၊ အခြားအသုံးပြုမှု GNU / Linux ကိုသင်ရှာဖွေနေပါက FreeBSD ကိုသုံးပါ။
FreeBSD တွင် GNU / Linux ရှိ HW အထောက်အပံ့အနီးတွင်မည်သည့်နေရာမှမရှိကြောင်းသတိရပါ။ Ubunbu သို့မဟုတ် Fedora ကဲ့သို့သော distros များတွင် USB devices များချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်ခြင်း (Windows ထက်ပင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်) ။
နောက်ဆုံးတွင် PC-BSD 9.0 ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားစဉ်က၎င်းသည်လေးလံသော၊ ကြမ်းတမ်း။ မပြုပြင်ရသေးသည့်၊ ခက်ခဲသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းမသက်မသာနှင့်၎င်း၏ graphical package manager သည်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်တဖန်အကောင်းတစ် ဦး post ကို :) ။ အခုတော့ openSUSE 12.2 ကို KDE နဲ့စမ်းကြည့်ပါ။
၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ taringa post ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်
ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Debianero ဖြစ်ပြီး .deb packages များသည်နို့ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤ distro ကိုစမ်းသပ်သည့်အခါ openSUSE သည် KDE နှင့်အရှုပ်တော်ပုံ repositories နှင့်အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ ဝါကျတစ်ချက် .. Debian တွင်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအရာသည် openSUSE တွင် community repos ကိုပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်ပျောက်ကွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ တည်ငြိမ်မှုအတွက် Debian တည်ငြိမ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများကြားတွင်၊ သို့သော် ပို၍ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဆော့ဝဲလ်များပါရှိသည်။
KDE 4.10 ကို install လုပ်ခြင်းသည်ဤတရားဝင် repos များကိုဖြည့်စွက်ရန်မလွယ်ကူပါ။
zypper ar -f http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/Extra/KDE_Release_410_openSUSE_12.2/ KDE410 အပို
zypper dup –KDE410 မှ KDE410Extra မှဖြစ်သည်
အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ၊ သင့်မှာ KDE 4.10 already ရှိသည်
အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်အတွက် openSUSE သည်ဒုတိယနေရာတွင်မရှိပါ။ ပြီးတော့ opensuse ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Plasma theme ဟာပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ KDE 12.3 နဲ့ opensuse 4.10 ကိုစောင့်ဆိုင်းပါ။ 🙂
KDE desktop ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုက်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက Kubuntu 12.04 နှင့် 12.10 တို့ကိုမည်သည့်နေရာမှစွန့်ပစ်ခဲ့သည်ကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် version 12.10 နှင့်အတူနေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အထောက်အပံ့အချိန်သိပ်မများသော်လည်း 12.04 ထက်များစွာကောင်းမွန်သည်။ နောက်မှငါ 13.04 သို့မဟုတ် 13.10 သို့မဟုတ် 14.04 ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီးသူတို့ကိုငါပိုကြိုက်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ် install လုပ်သောကြောင့်အထောက်အပံ့အချိန် (LTS) ကိုကျွန်တော်သိပ်ဂရုမစိုက်ပါ။
ငါမကြာသေးခင်ကပဲ Kubuntu 12.10 ကိုစမ်းသပ်နေတယ်။ ၂ ရက်လောက်ကြာတယ်။ ငါကယေဘုယျအားဖြင့်လျောက်ပတ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Chakra နဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်သူကသူ့ဖနောင့်အထိတောင်မှမရဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ Chakra မှာကျွန်တော်တို့ console နဲ့လုပ်စရာတွေရှိနေသေးပေမယ့်အိမ်မှာရေးဖို့ဘာမှမရှိဘူး။ မည်သည့် package ကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်နှေးကွေးသောအချက်သည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် repositories တွင်များစွာသော packets ပမာဏကိုမနာလိုဖြစ်ပြီး (များသောအားဖြင့်သူတို့ကိုဘုရားသခင်မသုံးသော်လည်း) KDE distro အနေနှင့် Chakra သည်အတော်လေးအားသာချက်ရှိသည်။
"အစပျိုးသည့်ပစ္စည်းသည်မည်သည့်အထုပ်ကိုမဆိုထည့်ရန်အနှေးနှေးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ "
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ Pacman packet manager ရဲ့ကြော့ရှင်းပြီးပေါ့ပါးမှုကိုအမွေဆက်ခံသော Chakra နှင့်ရင်းနှီးခြင်းဖြစ်သည်။ Kubuntu သည် dpkg နှင့် .deb တို့နှင့်ဆက်ဆံရသည်မှာစိတ်ကူးပါ😛
ဖန်သားပြင်ပြသထားသည့် Firefox အခင်းအကျင်းသည် FXChrome ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လွန်ခဲ့သောနွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်သည် Kubuntu ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Wifi နှင့်အထူးသဖြင့် Broadcom ကြိုးမဲ့ကဒ်ပြား (ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့အသုံးပြုသော) နှင့်ပြproblemsနာများကြုံခဲ့ရပြီး၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းမှာအထုပ်ကိုတပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ « firmware-b43-lpphy -installer »။ အဲ့ဒီကနေငါမှာဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူး။
ကျွန်တော့်ကိုအရမ်းသိချင်တဲ့အချက်က KDE shutdown options မှာ Hibernate option မပေါ်လာဘူးဆိုတာပါပဲ။
« Nepomuk + Akonadi အခုသူသည်ဘောလုံးများကိုထိလျှင်၎င်း။ KDE 4.8 မှာ Nepomuk ကိုကျွန်တော် disable လုပ်ထားတယ်။ ပြproblemsနာမရှိဘူး။ အခု Kmail အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်သည် Kmail ကိုပိုမိုနှေးကွေးသည်ဟုခံစားရသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်အခြားအရာများပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ »
ကျနော်တို့ KDE အတွက်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲ Postler နှင့်ဆင်တူပေါ့ပါးသည့်အခြားရွေးချယ်စရာသစ်ကိုစောင့်ရမည်
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Nepomuk + Virtuoso + Strigi (+ KMail + Dolphin semantic search + တခြားအရာအားလုံး) Arch x4.10_86 (i64 5, 480Ghz, 2.67Gb RAM) ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်၏တောက်ပသော 8 အသစ်မှာကောင်းမွန်သည်။
Hmm ဟုတ်ကဲ့၊ WIFI module တွေ update လုပ်တဲ့အခါမင်းမှာ Debian နဲ့ပြproblemsနာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပြdriversနာက ndiswrapper 0_0 ကတဆင့် Windows driver * * buntu ကိုသုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်။
ငါ Elav နှင့်အတူလက်တွေ့ကျကျအရာအားလုံးသဘောတူသည်။ Kubuntu ဟာအကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်၊ ပြီးတော့ဒါကပိုပြီးပေးတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနှင့်မြန်နှုန်းကိုအလွန်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်း PCBSD အပေါ်စိတ်အားထက်သန်မိပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ငါကြိုးစားခဲ့သောနောက်ဆုံးမူကွဲ ၉ ခုသည်တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း kernel panic ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းကိုဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်သည်။
Elav သည် PC-BSD ကိုအလျင်အမြန်ပြန်လည်သုံးသပ်သောကြောင့်ဤ OS နှင့် ပတ်သက်၍ သိကျွမ်းသူတစ် ဦး သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးနိုင်လျှင်ကောင်းပေလိမ့်မည်။ မည်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲအမျိုးအစားတွင်မဆိုလည်ပတ်လျှင်လည်း။
အကယ်၍ ၎င်းသည်မည်သည့် hardware အမျိုးအစားတွင်မဆိုလည်ပတ်လျှင်လည်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ VIA chipset နှင့် OpenChrome ဗီဒီယိုပါသည့် Celeron တွင် X ကိုစတင်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် Laptop တွင်အသံ၊ တောက်ပမှုနှင့်မီဒီယာပြန်ဖွင့်ခြင်းထိန်းချုပ်သော့များကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။
PC-BSD ကို install လုပ်ရန်၊ သက်တမ်းအတွက်၊ FreeBSD ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ပိုကောင်းသည်၊ စုစုပေါင်း FreeBSD သည်လှိမ့်ထုတ်လွှတ်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အချိန်အတိုင်းအတာတိုင်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင့်လက်ချောင်းများကိုဖြတ်ပြီးသစ်သားထိခြင်းတို့ပြုလုပ်စရာမလိုပါ။ အဟောင်းကိုဗားရှင်းကနေခေတ်သစ်မှအဆင့်မြှင့်နေစဉ်။
IncBSator တွင် ArchBSD တွင် ပို၍ ခေတ်မီပြီးလက်တွေ့ကျသော FreeBSD ကိုစိတ် ၀ င်စားသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစီမံကိန်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်မည်သို့တိုးတက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။
ငါ linux ထဲမှာနေဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ Chakra ISO အသစ်ထွက်လာကတည်းက BSD ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်
ကောင်းပြီ၊ သင် Linux ကဲ့သို့ application များကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည် Linux တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
Probá Mageia2 @elav ။ ငါလက်တော့ပ်တွေပြောင်းပြီး distros တွေနဲ့ပြthousandနာထောင်ပေါင်းများစွာမစခင်အထိပိုပြီးကြိုးစားရန်ဘယ်တော့မှစိတ်မကူးခဲ့ဘူး၊ ပိုပေါ့ဟုဆိုပါစို့။ အမှန်တရား၊ အခုငါကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ dvd.iso ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ update တွေအပြင်သင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ repo အဖြစ်သုံးတဲ့ DVD မှာ driver တော်တော်များများပါပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ netbook အဟောင်းအတွက် KDE distro ကိုဘာအကြံပေးပါသလဲ။ 1Gb သိုး၊ IntelAtom, GMA 450?
ငါ Debian ကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်
ထို hardware ဖြင့်မည်သည့် KDE distro ကိုမဆိုကျွန်ုပ်မလိုချင်ပါ၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသော desktop environment တစ်ခုရှိရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ဥပမာ Xubuntu 12.10 ။
တစ် ဦး ကအလင်း, ခေတ်သစ်, ကောင်းမွန်စွာစနစ်တကျနှင့်အားလုံးအထက်အလွန်လျှင်မြန်စွာ distro?
Arch Linux ။
Optimized KDE ပါသည့် Debian သည်ကောင်းစွာလည်ပတ်ပါသည်။ သို့သော် desktop, office နှင့် browser တို့တွင် ram အမြန်နှုန်းကိုမသုံးလိုပါ။ ပန်းခြံ၏အခြားဘက်သို့သွားပြီး Icewm နှင့်အခြေခံများသို့မဟုတ် lxde ထည့်သွင်းရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ သငျသညျ icewm သင်ယူဖို့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာမရှိကြပေ။
အကယ်၍ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လျှင်မင်းကသင်၏ခြေအိတ်ကိုနို့စို့နေလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည် ubuntu ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းအတူတူပါပဲ၊
ဒီတော့ Canonical ဟာဘာမှမှန်ကန်တဲ့အရာပဲ။
ဒါကြောင့် Google မှာရှိတဲ့ GNU / Linux ပို့စ်များဟာ Ubuntu ဖြစ်ရမယ်။
.that Instagram သည်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး Ubuntu မှဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီ။ FB သို့ရောင်းချခဲ့သည်
Ubuntu ဆာဗာသည်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် SUSE Enterprise Linux နှင့် RHEL တို့အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည် (Landscape is great)
Ubuntu နှင့် Ubuntu ဆာဗာတို့သည်ချိတ်ဆက်ရန်သင်စဉ်းစားနိုင်သည့်အရံပစ္စည်းအပါအ ၀ င်လက်ရှိ HW out-of-the-the-box အားလုံးနီးပါးကိုအမှန်တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Ubuntu ဖုန်းသည် SWEEEEET ဖြစ်ပြီး Java တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် Android (AJJJJ) အတွက်အလားအလာရှိသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကတိပေးသည်။
တရားဝင် Ubuntu ဗားရှင်းကို ARM တွင်အလုပ်လုပ်ရန်တီထွင်နေသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တက်ဘလက်များစွာတွင်တပ်ဆင်ပြီးအမှန်တကယ် desktop ကွန်ပျူတာများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။
.that ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူမိုက်များကိုပါးစပ်များကိုဖြည့်ရန်ပေးခဲ့ပြီးနောက် Unity သည်ပင်မ GNU / Linux desktop environment တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
.Vonve ၏ Canonical ၏သဘောတူညီချက်ကြောင့် Ubuntu ၌သာမက GNU / Linux distros များတွင်ပါ Steam ရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Canonical ကတကယ်မှားယွင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​သူတို့ဟာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါပဲ။
ရှုပ်ထွေးမှုသည် Kubuntu ဖြစ်သည်။ သိသည်။ Linux Mint KDE သည် Ubuntu ဖြစ်သော Kubuntu ကဲ့သို့အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်၊
ရှင်းနေပါစေဘေးအန္တရာယ်သည် Kubuntu နှင့်သူတို့၏ပြောဆိုမှုများကိုခုခံကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောဗဟုသုတမရှိဘဲသူတို့၏နှုတ်ကိုဖွင့်သူများဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေရန်
ဟေးဟေးစိတ်ငြိမ်နေပြီ၊ ငါတို့အားလုံးမှာစလုပ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ရဲ့ distro color ကိုခုခံကာကွယ်တဲ့စင်မြင့်တစ်ခုရှိတယ်၊ နောက်တစ်ခုက * buntu မှာအဆုံးသတ်သမျှကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေပေါ့။
ပြင်ဆင်ချက် -“ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသူများအတွက်” ဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းကောင်းလေ့လာနိုင်တယ်၊ +1 ။
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Kmail ကိုအထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုပြီးနီပွန်မက်ကိုပိတ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုအလွန်နှေးကွေးစေခြင်းကြောင့်ယခုဆိုလျှင် Nepomuk ကို Kmail ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါကအခြား client တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားရပါလိမ့်မည်။ ဒီဟာငါ့အတွက်ဆိုးဝါးပုံရတယ်
KDE 4.10 သုံးသူတိုင်းအတွက်အကြံဥာဏ်။ နောက်တဖန် nepomuk ကိုသုံးပါ။ ၎င်းကို ZERO မှပြန်လည်ရေးသားသည်၊ strigi roll ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ၊ ယခုသူသည် 'pass' နှစ်ခုလုပ်သည်။ တစ်ခုမှာဖိုင်အမည်ဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်။ နောက်တစ်ခုကအကြောင်းအရာဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယခုနောက်ဆုံးတွင်သူကကစားသည်နှင့်အလုပ်လည်းလုပ်သည်။ nepomuk tags များ၏ kioslave ကိုအသုံးဝင်သည်။ ကိရိယာများကိုဗီဒီယိုများဖြင့် tags များသတ္တုတွင်းတူးဖော်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော nepomuk အတွက်။
KDE 4.10 တွင်ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသောအတိုင်း nepomuk ကိုစတင်အသုံးပြုရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
၁) nepomuk သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ခြစ်ရာကနေစတင်ရန်လုံးဝလိုအပ်သော။ 'Nepomuk Cleaner' သို့မဟုတ် alt + f1 (krunner) ဖြင့်ရှာဖွေပါ။
၂) nepomuk ကိုပြုပြင်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည် 'indexing' ဟူသောနောက်ထပ် tab တစ်ခုရှိသည်။ ထိုတွင်အသေးစိတ်အမျိုးမျိုးကိုသင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
- အမျိုးအစား (စာရွက်စာတမ်းများ၊ အသံ၊ ရုပ်ပုံများ)
- ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော (MIME အမျိုးအစား၊ မျက်နှာဖုံးအလိုက်)
- ဖိုလ်ဒါများ (ဤတစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သည်)
nepomuk ကို (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့် ၄.၁၀ တွင်စမ်းကြည့်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာနောက်ဆုံးမှာသူ၌ရှိသင့်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဒါကြောင့်သူ့ကို nepomuk လုပ်နေတာကိုဘယ်သူမှမစောင့်ဘူးလား။
nvidia ဂရပ်ဖစ်ပါသော Intel laptop များတွင် osx XDD ကိုတပ်ဆင်ပြီး craps bsd's xd ကိုရပ်တန့်ပါ။
ပန်ဒီငါ့ hw ဖြစ်ပါတယ်
intel r pentium, r CPU g630 2.70ghz
iosx ကို install လုပ်လို့ရလား။ ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတာကိုသင်လေ့လာနိုင်ပါသလား။ ငါအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ပါဘူး ၂
"၎င်းတွင် osx ကိုကျွန်ုပ် install နိုင်ပါသလား။ "
မဟုတ်ပါ၊ MacOS သည်လက်မှတ်ထိုးထားသော HW ပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။
မည်သည့် HW Intel တွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည့် 'Mac Hackintosh' (Hackintosh 'ဟုခေါ်သော) အချို့ရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားအက်ပဲလ်က ၄ င်းတို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်လိုင်စင်ကဤဟက်ကာများအသုံးပြုမှုကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်သူတို့ကအက်ပဲအားတက်ကြွစွာတိုက်ခိုက်နေသည်ဟုသင့်အားအသိပေး ဒါကြောင့်ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားဖြစ်စနစ်သို့ hacking ဥပဒေချိုးဖောက်နေသည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ ၎င်းသည်တရားဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေအခြားအရာတစ်ခု၌သင်၌ဂူဂဲလ်တွင်သင်ခန်းစာများစွာရှိပြီးနောက်လိုက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၀ င်းဒိုးများကိုဖောက်ထွင်းခြင်းသည်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေသည်
မည်သည့် PC တွင်မဆို DVD မှမူလ MacOS ကိုသင် install လုပ်ဖူးပါသလား။ ဒါတောင်မှ bounce ခဲ့တာလဲ
unsigned PC များပေါ်တွင် MacOS ကို install လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ cracked-illegal- copy တစ်ခုကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ သင်မှားနေသေးတယ်၊ pc က Intel i5 ပါတဲ့ hackintosh တစ်ခုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ echos မှမူရင်းကူးယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ tonymac ကိုသင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် vanilla ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ efi ပြforနာအတွက် chamaleon bootloader ရှိဖို့လိုပေမယ့်ကျန်တဲ့အရာတွေအတွက်၊ ငါ့ pc ပေါ်မှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲကျက်သရေနဲ့တူတယ်။ သင် ၀ ယ်ယူသော iso ကိုယူရို ၂၀ ဖြင့် Pendrive သို့လွှဲပြောင်းပြီး Chameleon ကိုထည့်ပြီး install လုပ်ပါ။
ငါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရည်မှန်းချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး, Kubuntu အောင်မြင်မှုများ KDE အောင်မြင်မှုများနှင့်မည်သို့ကွာခြားသလဲ
သင်အမည်တိုးတက်မှုများသည် KDE 4.10 ၏ပုံမှန်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့ကို Canonical run သော Kubuntu ဗားရှင်းအဟောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်မိုက်မဲရာဖြစ်သည်။
ငါ့အဘို့ elav သည်သူ၏ဆောင်းပါး၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူသည် Kubuntu ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုမမှ distro အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုရှင်းလင်းစွာရည်ညွှန်းသည်။
ထို့အပြင် Kubuntu သည်အခြား distros များကဲ့သို့ software version များတူညီစွာလည်ပတ်နိုင်သဖြင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်မရှိပေ။
Kubuntu သည်ဖောင်းပွ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းထက်မကပါ။ အကယ်၍ သင်သည် 'bloated' ကိုအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်တွင်ရှာဖွေပါကအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည် Kubuntu ။
Ubuntu အတွက်တော့အံ့ world စရာကောင်းတဲ့ GNU / LINUX ၏ကမ္ဘာကြီးကိုသိကျွမ်းဖို့ကောင်းပေမဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြproblemsနာတွေအများကြီးပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ Linux ၏ mint-Debian ဗားရှင်းကိုပြောင်းတော့မည် အလွန်အလားအလာ
ပြီးတော့ Kubuntu နဲ့ Xubuntu တို့မှာလည်းသူတို့ဟာ The Community ရဲ့လက်ထဲရောက်သွားကတည်းကမကျော်လွှားနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေရှိတယ်။ ဘုရားရှင်ဘုရားမဲ့ဝါဒီ၊ ကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သောလေ့လာမှုသည်။ : OR
ကျနော့်အမြင်အရ Canonical လိုကုမ္ပဏီမျိုးကိုဖြန့်ဖြူးတာကိုရပ်ကွက်ကထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပထမတစ်ခုကဒုတိယထက်ပိုဆိုးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပထမ
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၎င်းသည်ရပ်ရွာမှထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသောအခြား distro (သို့မဟုတ်အတူတူပင်) ထက် ပို၍ ချက်ချင်းပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ထိုစကားစုသည်အချို့အတွက် -
Community → God
Thunder ပြနာကဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီသည်မာရ်နတ်ဖြစ်သည်ဟုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် Canonical သည် Ubuntu ကိုအမြဲမြင်သာမြင်သာမှုရှိစေပြီး Unity အပြန်အလှန်အားဖြင့် Ubuntu ဖုန်းဖြင့်ယခုမြင်တွေ့နေရသောအရာအားလုံးကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်သူတို့ဟာ * buntu ရဲ့ကျန်အပိုင်းကိုအားမထုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် Canonical ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရပ်ရွာကအားစိုက်ထုတ်တဲ့အခါကုမ္ပဏီတော်တော်များများထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်။
အခုတော့အရာရာတိုင်းကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းလင်းပြီးပြီ။ မင်းရဲ့ရာထူးကိုငါ ၁၀၀% ဝေမျှလိုက်ပြီ
"Canonical ထိသမျှအရာအားလုံးရွှေသို့လှည့်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Kubuntu နဲ့ Xubuntu မှာအထောက်အထားရှိတယ်။
အလွန်မှန်ကန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင် Xubuntu နှင့်ပြfromနာလုံးဝမရှိဟု zero
Kubuntu ကကျွန်တော့်အတွက် linux တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲဒါကတစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီးပြီ။ ငါအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကို KDE နဲ့ QT application တွေအတွက်အရသာပိုကောင်းစေခဲ့တယ်။ ငါတကယ်သဘောကျတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ debian ပါ။ အဲဒါကိုစျေးကြီးတဲ့မိုက်ခရိုဆာဗာတွေမှာသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ desktop PC တွင် Chakra သည်အကောင်းဆုံး KDE distro ကိုချထားသည်။
ငါ GNU / Linux ပေါ်မှာတစ်နှစ်မပြည့်ခဲ့ဘူး ယခုအထိကျွန်ုပ် Ubuntu, Mageia 2, OpenSuse, Debian ကိုကြိုးစားပြီး LiveCDs ကိုကြည့်ပြီးရှာဖွေခဲ့သော်လည်းမည်သည့်ပြproblemsနာမှမရှိဘဲကျွန်ုပ်နှင့်တကယ်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးခံစားနိုင်သည့်တစ်ခုမှာ Kubuntu ဖြစ်သည် ။ KDE သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Ah Elav သည် .rpm နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် distros များကို BOOOOM ဟုမပြောပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ကွန်ပျူတာကဟုတ်ကဲ့ - စ
မှတ်သားစရာကောင်းသည်မှာ၎င်းသည် Canonical နှင့်အနည်းငယ်သာသက်ဆိုင်သည် (အဆုံးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရန်ပုံငွေများကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Kubuntu ၏အဓိကတီထွင်သူများမှာအတူတူပင် ဖြစ်၍ Launchpad ကိုနားလည်ရန်လုံလောက်သည်။ Canonical သည် Ubuntu မဟုတ်သောစီမံကိန်းများကိုသာထောက်ပံ့သောကြောင့်၎င်းမှာအမြဲတမ်းလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ) Kubuntu သည်လက်ရှိအဆင့်သို့ရောက်ရှိပါက KDE နှင့်အခြေစိုက်စခန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရသည်။ ယခင် Ubuntu ၏ပြောကြားချက်များအရ (KDE4or 4.2 ကိုလက်ရှိ KDE 4.8 or 4.10 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မမျှတပါ)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါ။ Ubuntu-Canonical တာလီဘန်ဆန့်ကျင်သူများမလိုချင်ရင်တောင်သူသည် Manjaro သို့မဟုတ် Chakra ကဲ့သို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ သင့်အတွက်ကြောင့် Kubuntu သည်ယခုထိဆက်လက်တည်ရှိနေသည်မှာအမြဲတမ်းရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် ကအသိအမှတ်ပြုရန်။
ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ဒီမှတ်စုကို "elav" နဲ့ရေးထားတယ်။ မင်းကမစောင့်နိုင်တော့တော့ဘူး။ သစ်ပင်မှသစ်တော်သီးကိုတောင်းတာနဲ့တူတယ်။
ငါ့အချိန်ဖြုန်းတီးစရာမလိုဘဲမင်းကိုဘာပြောနိုင်မလဲ ငါသိတယ် ငါနင့်ကိုငါ့မျက်နှာကိုမိုက်မဲတဲ့သူလို့ခေါ်စေချင်တယ်။
တစ်ချိန်ကပညာရှိတစ် ဦး က“ မင်းက troll ကိုမကျွေးနဲ့”
စိတ်အေးအေးထားပါ၊ “ ခွေးများဟောင်လျှင်၎င်းသည်ငါတို့စီးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်” ကိုသတိရပါ
Elav, ငါတို့ကဲ့သို့များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဘလော့ဂ်အတွက်အထူးသဖြင့်သင့်ပြည့်စုံသောဆောင်းပါးများကိုသာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Elav ကိုဆက်သွားပါ
သူကမိုက်မဲသည်ဟုမပြောခဲ့ပါ၊ သူကမှန်တယ်၊ Kubuntu ကို Canonical ကရန်ပုံငွေထောက်ပံ့တဲ့အချိန်မှာ +1 မှာ developer ၁ ခုသာရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီခြားနားချက်သိပ်မရှိဘူး၊ ကန့်သတ်ချက်အနည်းငယ်ရှိပေမယ့်သိပ်မနည်းလှဘူး၊ သင့်ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ။
Man, မင်း post ကိုမိုက်မဲတယ်လို့ပြောပြီးဒီအဆုံးသတ်လိုက်:
ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ဒီမှတ်စုကို "elav" နဲ့ရေးထားတယ်။ မင်းကမစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါက elm ထဲကသစ်တော်သီးကိုတောင်းတာနဲ့တူတယ်။
ကျွန်ုပ်အကြောင်းသင်မသိပါ၊ သို့သော်မျဉ်းကြောင်းများအကြားမည်သို့ဖတ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ 😉
ငါမျဉ်းကြောင်းတွေကြားမှာဘယ်လိုဖတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လားဆိုတာမင်းတကယ်မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီဟာကပုဂ္ဂလဒိsomething္ဌာန်ကျတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင်သူဟာသင်ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်ချက်ပေးတဲ့စကားစုအချို့ကြောင့်သင့်ကိုသူပြောနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ :
"ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Kubuntu နဲ့ Xubuntu တို့မှာသက်သေအထောက်အထားရှိတယ်၊ သူတို့ကသူတို့အသိုင်းအဝိုင်းလက်သို့ရောက်ကတည်းကမကျော်လွှားနိုင်သော .. "
သင်ပြောသည့်အရာသည်အတော်အတန်မှန်ကန်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်မျဉ်းကြောင်းများအကြားဖတ်လျှင်၊ သင့်အတွက်ရပ်ရွာသည်အရည်အသွေးသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူပြီးကုမ္ပဏီသည်အရာအားလုံးကိုသာဖျက်ဆီးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်ဖြစ်သည်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှဘာမှမရှိဘူး၊ အရာရာကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားတယ် x)
သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာ Canonical တို့ထိသမျှသည်ရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။
သူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်ထားတာတွေရှိခဲ့ပေမယ့်ဒါမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး Xubuntu y Kubuntu.. ပြီးတော့ငါဒီအမြင်ကအရမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး .. အမြင်
သင်၏မှတ်စုကိုဝေဖန်မှုကြောင့်သင်သည်မိုက်မဲသည်ဟုသင်ထင်မြင်သည် (ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကိုယ့်ကိုငါတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဖူးတဲ့အရာအတွက်အရိပ်အမြွက်ပေးရင်၊ တစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်လား) ဟုတ်ကဲ့၊
အမည်မသိ> / dev / တရားမဝင်သော
Elav ဒီဟာမင်းအတွက်ပဲ။ မင်းကိုငါလေးစားတယ်၊ ငါအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်။ ငါဘလော့ဂ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်ကိုချစ်၏။ ငါကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဖြူးအများကြီးမသုံးကြဘူး, ငါ LMDE KDE နှင့်အတူရှိ၏, ဒါပေမယ့်ငါကြိုက်နှစ်သက်သည်းခံပါ, မှတ်ချက်များ၏လေသံယဉ်ကျေးစောင့်ရှောက်သင့်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ငါသဘောမတူဘူးဆိုရင် ငါသည်သင်တို့ကိုလူမိုက်ဟုမခေါ်တော့ကြောင်းစိတ်ချစွာငြိမ်သက်စွာနေပါ။ ဤစကားသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် - အရသာအတွက်အရသာရှိပါသည်။ Elav ကိုဆက်သွားပါ
ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်လူတိုင်း၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလေးစားရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည်ထင်မြင်ချက်ပေးသောဆောင်းပါးဖြစ်လျှင်များစွာသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်နှင့်သဘောတူနိုင်သည်၊ မတူနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ပြောသည့်အတိုင်း - သဘောမတူရန်၊ မှားစရာမလိုပါ သူတို့မျက်နှာမပြဘူး .. ဒါကမှန်တယ်မဟုတ်လား။
elav, အဘိုးအို၊ သူ့ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့နာမကိုမကြည့်ပါနဲ့။ ဒါကြောင့်စိတ်အေးအေးထားဖို့မထိုက်တန်ဘူး။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့ဇနီး၏လက်တော့ပ်ပေါ်ရှိ kubuntu ကိုအတည်ပြုတော့မည်။ ကျွန်ုပ်သည်မထင်မှတ်သော 1 Gig ram ram ရှိသော mini သည်အရွယ်အစားဖြစ်သည်။
ယနေ့အထိ (သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအလုပ်မှာ Dell Vostro ပေးသည်) ကျွန်ုပ်သည် Kubuntu နှင့် Debian KDE ကို 1GB RAM ပါသော Netbook တွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး wide သင်သည်အနည်းငယ်သောအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပင်အလုပ်လုပ်သည်။
elav ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမင်းဘာကြောင့်ဗားရှင်း 12.04 ကိုအသုံးပြုခဲ့တာမဟုတ်၊ ၁၂.၁၀ မဟုတ်သနည်း။
၁- ကျွန်ုပ်၌ထိုဗားရှင်းတွင်ဒေသခံမှန် ရှိ၍ ဖြစ်သည်
2- LTS သည် ၁၂.၁၀ မဟုတ်ပါ
ဒုတိယ၊ ခင်ဗျားမသိတာတောင်မှမင်းရဲ့ကိစ္စမှာတရားဝင်တယ်လို့ငါမထင်ဘူး၊ လာမယ့် ၅ နှစ်အတွက်သင်ထပ်တူဗားရှင်းကိုသုံးမယ်လို့မထင်ဘူး !!! xD
ဟားဟား၊ မင်းမှန်တယ် ..
Good elav the နောက်ဆုံးတွင် Debian ကိုစွန့်ပြီး Arch xD သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း kubuntu ကိုစဉ်းစားခဲ့သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင် kubuntu သည်အလွန်အမင်းမတင်လာသောကြောင့် Arch ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါမှတ်ဥာဏ်နည်းသွားမယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာ debian (170mb ram) နဲ့တူတယ်။
ငါအရင်က libreoffice ကိုသုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ calligra ကိုစမ်းသုံးကြည့်တော့မယ် (သူတို့ကဗားရှင်းအသစ်ကိုပဲထုတ်ပေးတယ်) ဒါပေမယ့် .doc အတွက် abiword ကိုငါသုံးမယ်။ ငါကောင်းတယ်လို့ထင်သလား
Arch !! ကောင်းသည်။ ကောင်းပြီ၊ .doc အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသုံးပါ။ Calligra နှင့်အတူတူကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ဒီဗားရှင်းဟာဒီကဏ္aspectမှာတိုးတက်လာနိုင်သည်။
ကျန်ဖိုင်များကိုဖွင့ ်၍ မရပါ၊ ၎င်းသည်လည်း doc သို့တင်ပို့မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအရာတွေအတွက် abiword, ကျန်တဲ့ calligra ကိုငါသုံးမယ်
စကားမစပ်, caledonia 4.10 at ထက် 4.8 မှာအများကြီးပိုကောင်းကြည့်ရှုသည်
စကားမစပ်ငါမှတ်ပုံတင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဒါကငါ့ကို xD ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး
အရမ်းကြည့်ကောင်းတယ် !! 😀
အကယ်၍ KDE 4.10 သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ဗားရှင်းများထက်များစွာပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နေပါက၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများကိုသတိပြုမိပြီး 1GB နှင့်ပင်လျှင်မြန်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားဟာအရာရာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားပဲ၊ ဟုတ်တယ်၊ သိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုရှိတယ်။ Canonical ထွက်တော့မှမရှိတော့ဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ nepomuk ပဲ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ယခုငါနှင့်အတူperfectlyုံနထေိုငျ ... ။ ငါမှာအမြဲတမ်း“ but” ပါရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏“ ပြီးပြည့်စုံသောတည်ငြိမ်မှု” နှင့်အညီဖြစ်သည်ဟုယခုငါရိုးသားစွာပြောခြင်း၊ ဖြစ်ပျက်မည့်အရာကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်အလွန်တိုးတက်ခဲ့သည်… ubuntu repositories ကနေခွဲချင်တာလား။ ငါ့အတွက်တော့အခြား OS မှလာသူများအတွက်အပေါင်းဖြစ်သည်။ ထိုအထောက်အပံ့အတွက် ubuntu tutorial မည်သည့်အလုပ်မဆို။ အရမ်း kubuntu များအတွက် ... နှုတ်ခွန်းဆက်သူငယ်ချင်း!
Ubuntu repositories ကနေခွဲထုတ်တာကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာ KDE packages များနှင့် "လိုအပ်သော" များနှင့်အတူ repository ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သူတို့သည်6လတစ်ကြိမ်ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်မူတည်သည်မဟုတ်။ 😉
Microsoft Office ကို Linux ပေါ်မှာ